ဖယ်ကွန်သိမ်းနှင့်အလားတူ ငှက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Temporal range: Eocene အစောပိုင်း – လက်ရှိ၊ 53–0 Ma
ဖယ်ကွန်သိမ်းနှင့်အလားတူ ငှက်များ (en: Falconiformes, ဖယ်ကွန်နီဖောမ်းစ်, "ဖယ်ကွန်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော") သည် ရှင်သန်ဆဲဖြစ်သော မျိုးရင်း- Falconidae (ဖယ်ကွန်သိမ်းနှင့် ကယ်ရာကယ်ရာငှက်မျိုးရင်းများပါ)နှင့် မျိုးကွဲမှု ရှုပ်ထွေးဆန်းကျယ်သည့် Paleogene မျိုးစိတ်များအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် မျိုးစဉ်(Order) တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှေးရိုးအယူအဆအားဖြင့် သားကောင်ဖမ်းငှက်များ (Birds of prey) ဖြစ်ကြသည့်- Cathartidae (ကမ္ဘာသစ်လင်းတ (သို့) ကွန်းဒေါလင်းတ) ၊ Sagittariidae (ကလောင်ငှက်) ၊ Pandionidae (ဝံလက်ငှက်) ၊ Accipitridae (လင်းယုန်/ သိမ်းငှက်/စွန်ရဲ) စသည့် ငှက်အမျိုးအနွယ်များကို Falconiformes အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ အမျိုးမျိုးသော ငှက်မျိုးရိုးဗီဇများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နှိုင်းယှဉ်မှု ရလဒ်တစ်ခုအားထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ဖယ်ကွန်သိမ်း (Falcons) များသည် Seriemas, ကြက်တူရွေး၊ စာကလေးမျိုးနွယ်များ ပါဝင်သည့် မျိုးတူအစုအဖွဲ့ (Clade) Australaves မှ တစိတ်တဒေသဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၎င်း ဖယ်ကွန်သိမ်းများပါဝင်သော Australaves မျိုးတူအစု Clade သည် ကြက်တူရွေး-စာကလေးများ မျိုးတူအစု Clade ဖြစ်သည့် Psittacopasserae နှင့် ပိုမိုနီးကပ်ဆက်နွယ်ပြီး ထိုငှက်များအားလုံးအား မျိုးစဉ်အထက်တွင်ရှိသည့် မျိုးတူစု Eufalconimorphae Clade အတွင်း ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သိမ်းငှက်နှင့် ကွန်းဒေါလင်းတတို့သည့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အခြေခံမျိုးတူအစု (Basal Clade) Afroaves သို့ ပါဝင်မှုမှတဆင့် Accipitrimorphae မျိုးတူအစု (Clade) ထဲသို့ ပါဝင်နေသည်။ ၎င်းမျိုးတူအစု Accipitrimorphae Clade သည် ဇီးကွက်မျိုးစဉ်၊ သစ်တောက်ငှက်မျိုးစဉ်များနှင့် ပို၍နီးစပ်နေသည်။
Braun နှင့် Kimball ပညာရှင်များမှ မျိုးရိုးဗီဇ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည့် ရလဒ်ထုတ်ပြန်ချက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်) ကိုအခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားသည့် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားရုပ်ပုံကားချပ်ကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ -
↑ ၁.၀ ၁.၁ "A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History" (2008). Science 320 (5884): 1763–68. doi:10.1126/science.1157704. PMID 18583609. Bibcode: 2008Sci...320.1763H.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds" (2014). Science 346 (6215): 1320–1331. doi:10.1126/science.1253451. PMID 25504713. Bibcode: 2014Sci...346.1320J.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ "A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing" . Nature 526 (7574): 569–573. doi:10.1038/nature15697. PMID 26444237. Bibcode: 2015Natur.526..569P.
↑ "Mesozoic retroposons reveal parrots as the closest living relatives of passerine birds" (2011). Nature Communications2(8). doi:10.1038/ncomms1448. PMID 21863010. Bibcode: 2011NatCo...2..443S.
↑ "Data types and the phylogeny of Neoaves" (2021). Birds2(1): 1-22. doi:10.3390/birds2010001.
Fauna Europaea (new): 5df85b43-ff5c-46b3-aa0e-5800d84b77ed
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖယ်ကွန်သိမ်းနှင့်အလားတူ_ငှက်များ&oldid=730542" မှ ရယူရန်